XOG: DF Somaliya oo looga digay inuu dhiig ku daato dhismaha maamulka Galmudug (Maxa cusub)? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: DF Somaliya oo looga digay inuu dhiig ku daato dhismaha maamulka...
XOG: DF Somaliya oo looga digay inuu dhiig ku daato dhismaha maamulka Galmudug (Maxa cusub)?
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta Mamulka Galmudug Cismaan Dheere oo la hadley Warbaahinta ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya hadii ay dooneyso in ay ka guul keento Galmudug ay raacdo Qawaaniinta iyo xeerarka u yaala dadka Galmudug.
Cismaan Dheere, ayaa waxa uu sheegay in Galmudug ay leedahay Dastuur iyo Nidaam islamarkaana la yaqaano qaabkii loo doortey Isagoo sheegay in mihiimadu ay tahay in nidaamkii galmudug lagu dhisey in la xaq-dhowro lana ilaaliyo Nidaamkii 11 beelood ay wax ku qeybsanayeen.
Sidoo kale, waxa uu sheegay in habraaca doorashadda loo maraayo ay ahaato mid cad oo la fahmi karo, taas oo aan mugdi ku jirin isagoo tilmaamey in haddii intaas la helo la heli doono maamul mideysan.
Wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta Mamulka Galmudug dhanka kale waxa uu sheegay in guddiga farsmadda aysan shaqo ku laheyn habraaca loo dooranayo.
inuu dhiig ku daato
maamul u dhisida Galmudug